किराबी संघलाई पार्टी करण गर्न खोजेको आरोप,१३ बुद्दे घोषण पत्र जारी गर्दै किराबी संघको दोश्रो केन्द्रिय बैठक सम्पन्न। - Ujyaalo Sandesh Online
समाचार डेस्क/ रामचन्द्र राई नेतृत्वको किरात राई विद्यार्थी (किरावि)संघले विवादका बिच पनि दोश्रो केन्द्रीय समिति बैठक धरानमा सम्पन्न गरेको छ। बैठकपछि ‘१३ बुँदे धरान घोषणापत्र’समेत जारी गरेको छ।
गत बैशाखमा सम्पन्न किराविको नवौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपाले आदेश पत्र जारी गर्दै किराबिसलाइ बिबादास्पद बनाउदै जितेन राईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चुनिएको थियो। यता भने राम चन्द्र लगायतका विद्यार्थीहरुले पार्टी भन्दा माथी उठि आफ्नो समुदायको हितको लागि ४ महिना पछि दमकमा एक कार्यक्रम गरि छुट्टै केन्द्रिय समिती घोषणा गरेका थिए। विभिन्न बिषय उपर छलफल गर्न भनी दोश्रो केन्द्रीय समिति बैठक धरानमा सोमबारमात्रै सकाएको छ।
किरात राई विद्यार्थी संघका संस्थापक भिम राई ।
तर, आफूहरुको संगठन आधिकारिक दाबी गर्दै छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको रामचन्द्र नेतृत्वको किराविले गत आईतबारदेखि धरानमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गर्यो। र, किराविलाई कुनै विचार समूह वा राजनैतिक पार्टीको दास बनाउन नहुने जिकिर गर्दै त्यस्ताको भण्डाफोर गर्ने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, धरान बैठकले मातृसंस्था अन्तर्गतका निकायमा देखिएका समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिई हल गर्न माग गरेका छन्। हालै किराया बेलायतको समेत आन्तरिक किचलो बाहिरिएको थियो। अहिले सोही कारण बेलायतमा गर्ने भनिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय किरात राई सम्मेलन’समेत अन्योलमा छ।
किरात राई बिधार्थी संघ केन्द्रीय कार्य समिति दमक झापा,
धरान घोषणा पत्र : २०७६
१) पहिचान सहितको किरात स्वायत राज्य निर्माणको लागी पहिचान पक्षधर किरात राई विद्यार्थीहरुको ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिऔं ।
२) प्रदेश नम्बर १ लाई किरात प्रदेश निर्माण गर्न सबै १ नम्बर प्रदेशवासीहरुलाई गोलबद्द गरौं ।
३) किरात राई विद्यार्थी संघलाई कुनै एउटा विचार समूह वा कुनै पनि राजनैतिक संगठनको भातृ संगठन बनाउने षडयन्त्रको अन्त्य गर्दै जबरजस्त संगठनलाई कुनै पनि पार्टीको दास बनाउने झुण्डहरुको भण्डाफोर गरौं ।
४) किरात राई यायोक्खालाई सबै किरात राईहरुको साझा संस्था बनाउ.
५) किरात राई यायोक्खा माहाततमा रहेको निकायहरुमा देखिएको संस्थागत समस्याहरु तुरुन्तै हल गर.
६) मे महिनामा बेलायतमा सम्पन्न गर्ने भनिएको किरात राई अन्तराष्टिय सम्मेलनको सम्बन्धमा देखिएको समस्या अबिलम्ब हल गरी समुदायको विभाजनलाई तुरुन्तै रोक.
७) मातृभाषाको शिक्षालाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्न बिद्यालयस्तरमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर.
८) धर्म निरपेक्ष राज्यमा भईरहेको अतिहिन्दुवादी गतिविधिको भण्डाफोर गर्दै धर्म निरपेक्ष राज्यलाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर ।
९) सबै खाले शैक्षिक संस्थाहरुमा समावेसी सिद्धान्तको आधारमा भर्ना कोटा निर्धारण तथा छात्रवृतिको व्यवस्था गर ।
१०) विश्वव्यापी रुपमा आतंकित पार्दै फैलिरहेको कोरोना भाईरस (COVID-19) को संक्रमणबाट सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न राज्यले थप बिशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउदै देशलाई संक्रमण मुक्त बनाउन पहल गर । साथै देशका सबै जिम्मेवार नागरिकहरु उक्त संक्रमण बाट जोगिन सचेत बनौ ।
११) कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको कृतिम अभाव सिर्जना गरि कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर ।
१२) चरम रुपमा भएको मूल्य बृद्धिलाई तत्काल समायोजन गर ।
१३) राज्य आतंकको रुपमा रहेको भ्रष्टचार, कमिशनतन्त्रलाई तत्काल नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टचारी र कमिसनखोरहरुलाई कारबाही गर ।